Waad ku mahadsantahay xiisaha aad u qabtay raadinta deeq ka timid Ururka McKnight Foundation. Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad barato naftaada kala duwanaanta Barnaamijyada iyo istiraatiijiyaddooda gaarka ah iyo shuruudaha deeqaha. Fadlan la soco in barnaamijyada qaar ay yihiin casuumaad keliya. Intaa waxaa dheer, McKnight wuxuu leeyahay wuxuu soo afjaray afar barnaamij: Waxbarashada, Gobolka & Bulshooyinka, Wabiga Mississippi, iyo Koonfur Bari Aasiya.
The Fanka & Dhaqanka barnaamijku wuxuu taageeraa ururada, barnaamijyada, iyo mashaariicda bixiya qaababka taageerada ee fannaaniinta shaqeeya iyo kuwa dhaqan -dhaqameedka ah si ay u horumariyaan una wadaagaan shaqadooda, una hoggaamiyaan dhaqdhaqaaqyada iyo bulshooyinka. Farshaxan -yahannadaas iyo dhaqan -yaqaannadu waxay kiciyaan mala -awaalkayaga wadajirka ah, waxay kobciyaan tayada nolosheenna, waxayna kor u qaadaan firfircoonaanta iyo firfircoonida Minnesota.
Xeeladahayaga waxaa ka mid ah: taageeridda iskaashiyo siiya taageero toos ah farshaxan -yahannada iyo dhaqan -yaqaannada; kobcinta iyo joogtaynta joogitaanka iyo muuqaalka fanaaniinta iyo hay'adaha dhaqanka ee aan la soo bandhigin, oo ay ku jiraan Fanaaniinta Madow, Asaliga, Aasiya, iyo Latinx, iyo kuwa ku nool miyiga, Qowmiyadaha Qabiilka, iyo guud ahaan Minnesota Weyn; iyo taageeridda fannaaniinta shaqeeya iyo kuwa dhaqan -dhaqameedka ah ee hormarinaya caddaaladda.
Ururada ku habboon u -qalmitaanka iyo shuruudaha xulashada ayaa awood u leh si toos ah u codso iyada oo loo marayo websaydhka McKnight.
Shakhsiyaadka ayaa codsan kara deeqda iyada oo loo marayo Golayaasha Farshaxanka Gobolka ama Farshaxanka Farshaxanka iyada oo loo marayo mid ka mid ah wada -hawlgalayaasha barnaamijka wehelnimada. Fanaaniinta dadweynaha ee deggan Minnesota waxay ka dalban karaan deeq kaashka Saadaasha Fanka Dadweynaha. Sanadkiiba mar, guddi ayaa doorta hal farshaxan si uu u helo a Abaalmarinta Farshaxanka.
Sida Loo Codsado Deeqda Fanka & Dhaqanka
The Barnaamijka Cilmi Baarista Iskaashatada (CCRP) xiisa-yare McKnight's International barnaamij, kaas oo ka shaqeeya sidii loo xaqiijin lahaa adduunyada oo dadka oo dhami ay u heli karaan cunto nafaqo leh oo laga soo saaro gudaha iyo joogtaynta. Barnaamijku wuxuu taageerayaa ka qaybqaadashada, cilmi baaris iskaashi ah oo ku saabsan xoojinta cilmiga dhirta iyo daaqa ee 12 dal oo ku kala yaal laba qaaradood — Afrika iyo Koonfurta Ameerika - halkaasoo saboolnimada iyo cunno yaraanta ay ka abuurtay “dhibco gaajo kulul.”
Mashaariicda CCRP waxay dhaliyaan hal-abuurnimo farsamo iyo bulsheed si loo wanaajiyo wax soo saarka, hab-nololeedka, nafaqada, iyo u sinnaanta bulshooyinka beeraha. Saamaynta baaxadda leh waxaa lagu ogaadaa marka fikradaha cusub, teknolojiyada, ama geedi socodyada la waafajiyo duruufaha kaladuwan, marka fikradaha ka imanaya cilmi baarista ay wax ka badalaan isbedelka siyaasada iyo waxqabadka, iyo marka hal abuurnimada ay dhiirigeliso guulo dheeri ah.
Habka Bixinta CCRP
The Cilmi-badeedka & Tamarta Midwest (MC&E) barnaamijka ayaa ku dadaalaya qaado tallaabo geesinimo leh dhibaatada cimilada adoo si aad ah u gooya wasakheynta kaarboonka ee bartamaha-galbeed 2030.
Barnaamijku wuxuu qaadanayaa a nidaamyada waxay beddelaan muraayadaha, iyadoo diiradda la saarayo wax ka beddelka xaaladaha sii waaraya dhibaatada cimilada, oo ay ku jiraan cunsuriyadda qaabdhismeedka. Bixinta deeqda waxaa lagu jiheeyaa xagga shaqada oo beddeleysa moodooyinka maskaxda, isbeddelaya firfircoonaanta awoodda, la shaqeynta bulshada, iyo horumarinta siyaasadaha isbeddelka, dhaqamada, iyo qulqulka kheyraadka, si si weyn loo gooyo wasakheynta kaarboonka ee Badhtamaha Galbeed 2030.
Xeeladaheena waxaa ka mid ah:
MC&E waxay leedahay nidaam codsi xiran. Soo jeedinta maalgelinta waxaa laga aqbalaa oo kaliya ururada lagu martiqaado inay codsadaan.
The Bulshooyinka Feejignaanta & Sinnaanta ah Barnaamijka (Jaaliyadaha) wuxuu kobciyaa awoodda la wadaago, barwaaqada, iyo ka qaybgalka iyada oo loo marayo afar xeeladood:
Istaraatiijiyaddan gudaheeda, waxaan dooneynaa inaan ku gaarno horumarin nidaamsan oo ku timaadda shaqsiyaadka, bulshada, iyo natiijooyinka bulshada. Waxaan fiirineynaa xariifnimada dadka si wada jir ah uga wada shaqeynaya guud ahaan Minnesota si aan u helno xalal farsamo oo daboolaya baahiyaha bulshada lagu qeexay, wax ka qabashada xaaladaha deegaanka, iyo u beddelashada siyaasadaha, dhaqamada, iyo hay'adaha siyaabo waara.
Sida loo Codsado Deeqo Bulsho firfircoon & Sinnaan